नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लहान शाखाले गर्याे ४३ लाख २१ हजार ८ सय २० मृत्यु दाबी भुक्तानी | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लहान शाखाले गर्याे ४३ लाख २१ हजार ८ सय २० मृत्यु दाबी भुक्तानी – हिपमत
सिरहा । जीवन बिमा के का लागि ? जवाफ प्रष्ट छ, रहँदा आफ्ना लागि, नरहँदा परिवारका लागि । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लहान शाखाले जीवन बीमा गराएका स्व. जलेन्द्र कुमार चौधरीको परिवारलाई रु ४३ लाख २१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ मुत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
लहान नगरपालिका वडा नं.६ निवासी बिमित स्व.जलेन्द्र कुमार चौधरीको परिवारलाई रु ४३ लाख २१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त मृत्यु दाबी रकम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लहान शाखाका प्रमुख पूर्ण कुमार कर्र्णले मृतकको श्रीमती छाया कुमारी चौधरीलाई चेक हस्तान्तरण प्रदान गरे ।
सो बिमा वापतको रकम परिवारले बुझेपछि मृतककी श्रीमति छाया कुमारी चौधरीले भने आफूहरुले बिमा वापतको रकम पाएको बताएकी छिन । श्रीमति छाया कुमारी चौधरीले भने श्रीमानको मृत्युले दुखित भएता पनि परिवारका लागी सो बिमा रकमले सहयोग पुगेको बताए ।
श्रीमानको मृत्यु भएपछि अब के गर्ने होला ? भन्ने पिर आफूलाई लागेको बताए । तर श्रीमानले बेलैमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बिमा गरेका कारण सो रकमले आफुहरुलाई परिवारमा आर्थिक रुपमा केही सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बिमाको रकम बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भ्रम मात्र रहेको र आफुले बिमा वापतको रकम तुरुन्त पाएको छाया कुमारी चौधरीले बताए ।
सेयर बजार परिसूचक नेप्से २५ सय अंकमा झर्यो
नेपाली बजारमा सुनचाँदी दुबैको मूल्यमा स्थिरता
नेप्से साताको पहिलो दिन ७२.३० अंकले घट्यो
बढ्यो सुनको मूल्य प्रतितोला ७०० रुपैयाँले
नेप्से परिसूचक घटेर २५ सय बिन्दुको अंकमा